Llama Slot - Myanmar Online Game
ဒီနေ့မှာတော့ Payline ကွက်တိနဲ့ Slot လဲဖြစ်၊ 4000x အထိလဲရနိုင်တဲ့ The Llama Slot လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့ သာမာန် Row3ခု Reel5ခုနဲ့ Slot မဟုတ်ပဲနဲ့ Row4ခု Reel5ခုနဲ့ Slot တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 243 ways လိုအနိုင်ရဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီး ရှုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ တိကျတဲ့ Payline 50 နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Slot တစ်ခုပါ။
Slot ကို Llama ဆိုတဲ့မြည်း Theme လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ ကျေးလက်ဒေသ၊ Country Feeling ကိုအပြည့်ရစေတဲ့ Slot လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရတနာမြေပုံတွေ၊ ရွှေရုပ်တုတွေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတဲ့ Feeling လဲပါဝင်တာမို့လဲ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Llama လေးရဲ့ စွန့်စားခန်းဖြစ်သွားပါတယ်နော်။
ဒါဆိုရင် Symbol လေးတွေကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်…
ထုံးစံအတိုင်း Special Symbol နဲ့ရိုးရိုး Symbol ခွဲခြားထားပါတယ်။ Special Symbol တွေမှာ Payout နှုန်းအနည်းဆုံးက စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ရတနာမြေပုံဖြစ်ပါတယ်။ သူက3ခုတူ 10,4ခုတူ 50,5ခုတူ 250 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပြောင်းဖူးအိတ်ပါ။ သူကလဲ ရတနာမြေပုံနဲ့ အတူတူပဲပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လှေကလေးကတော့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့3ခုတူ 20,4ခုတူ 100,5ခုတူ 300 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ ရွှေရုပ်တုဖြစ်ပါတယ် သူက3ခုတူ 20,4ခုတူ 100,5ခုတူ 400 အထိပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရိုးရိုး Symbol တွေကတော့ ဖဲချပ် Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K , Q, J, 10,9တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Bonus Symbol တွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Free Spin Bonus က ရီပြနေတဲ့ ဒီ Slot ရဲ့ဇာတ်လိုက် ကိုယ်တော်ချောလေး Llama ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Reel တိုင်းမှာပေါ်နိုင်ပါတယ်နော်။3ခုတူရင် 2,4ခုတူရင် 20,5ခုတူရင် 4000 အထိ လောင်းကြေးနဲ့မြှောက်ပြီးပြန်ပေးပါတယ်။ Free Spin အရေအတွက်အနေနဲ့ဆိုရင်3ခုတူရင် Free Spin 10ခါ၊4ခုတူရင် Free Spin 25 ခါ၊5ခုတူရင် Free Spin 25ခါ ဖြစ်ပါတယ်။
Wild Symbol ကတော့ နေဝင်ချိန်အရှေ့မှာ ခန့်ခန့်ညားညား Pose ပေးနေတဲ့ Llama ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wild ကတော့ ဖဲချပ်မှာဆိုရင် Joker အတိုင်းပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုသလိုအစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Payout နှုန်းကတော့3ခုကျရင် 25, 4ခုတူရင် 200,5ခုတူရင် 500 ဖြစ်ပါတယ်။ Wild ကအစားထိုးပေးတဲ့ထဲမှာ Free Spin Symbol တော့မပါပါဘူးနော်!
Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ငရုတ်သီးကိုက်မိသလို ကောင်းပေမယ့်လဲ ပူစပ်ပူလောင်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေတော့ လာပြီနော်။
Free Spin စတာနဲ့ ငရုတ်သီးတွေကို ခပ်မိုက်မိုက် နေကာမျက်မှန်တပ်ပြီးဝါးစားနေတဲ့ Llama အဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hot Chili ဆိုတဲ့ ငရုတ်သီး Symbol တစ်ခုအပိုပါလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူကတော့ Reel2နဲ့4မှာပဲပေါ်နိုင်ပါတယ်နော်။
ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တော့ Free Spin စစလှည့်ချင်းမှာ Multiplayer က 1 ကစပါတယ်။ Hot Chili တစ်ခါကျတိုင်း Multiplayer ကို 1 ဆင့်တက်စေတာပါ။ ဆိုတော့ ပူစပ်လွန်းလို့ မီးတွေတောင်တောက်နေတဲ့ Slot ထဲမှာ ငရုတ်သီးတွေ များများကျပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိတော့မှာတော့ အမှန်ပါပဲ!
အများဆုံး Multiplayer 8x အထိပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကစားနည်းမှာ အနိုင်အားလုံးကို ဘယ်ဘက်ဆုံးကနေညာဘက်ကို ကြည့်ရေပြီးတော့ Line တစ်ခုစီမှာအနိုင် တစ်ခုထက်ပိုခဲ့မယ်ဆိုရင် အများဆုံးအနိုင်တစ်ခုကိုသာပေးပါတယ်။ Payline 50 ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ကဲ.. ဒါဆိုရင် Llama လေးနဲ့အတူ ငရုပ်သီးလေးစားမိသလို ပူစပ်စပ်နဲ့ ရတနာရှာပုံတော် စွန့်စားခန်းဖွင့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot Session ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်ပါနော်!